झोलुँगोबाट लडेको बच्चालाई आयुर्वेद औषधी गर्दा खुट्टै काट्नु पर्यो ! उपचार गर्न पैसा छैन, २४ घण्टामै उपचार नभए गाह्रो छ ! सबैले शेयर गरौं(भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > झोलुँगोबाट लडेको बच्चालाई आयुर्वेद औषधी गर्दा खुट्टै काट्नु पर्यो ! उपचार गर्न पैसा छैन, २४ घण्टामै उपचार नभए गाह्रो छ ! सबैले शेयर गरौं(भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं- मात्र १४ महिनाका झापाका बालक श्रेयन बराईली । आफ्ना कलिला खुट्टाले टुकुर टुकुर हिड्न खोज्दै थिए । आफ्नो आमा र बुवाको एक मात्र सन्तान श्रेयनको चन्चलता, छुकछुके पन र बचपना हेरेर उनका बुवा आमा श्रेयनको भविष्य सजाउंदै थिए । छोरालाई भविष्यमा यस्तो बनाउंला उस्तो बनाउंदा मनमनै बिभिन्न सपना बुन्दै थिए । तर केहि महिनाअघि घटेको एउटा अप्रिय घटनाले श्रेयनको बाल्यकाल र आमा बुवाको बुवाको खुशी दुवै लुट्यो । झोलुंगो अर्थात् कोक्रोबाट लडेर श्रेयनको खुट्टामा गहिरो असर पर्यो । झापामै प्रारम्भिक उपचार गरेर त्यसको ६ दिनमा काठमाडौं ल्याउंदा श्रेयनको खुट्टै काट्नुपर्ने भयो ।
आफ्नै खुट्टाले ताते ताते गर्न थालेका श्रेयन एकै ठाउंमा थलिए । आमा बुवा श्रेयनको पहिलेको फोटो हेर्दै धुरुधुरु रुन्छन् र भन्छन् ः अब मेरो छोरो कहिले दौडिन्छ, कहिले टुकुर टुकुर हिड्छ ? दर्शकबृन्द नमस्कार म शिशिर भण्डारी । कसैको छोराछोरीको जीवनमा यस्तो घटना नघटोस । कसैको आमा बुवाले श्रेयनको आमा बुवाले जस्तो पिडा खप्न नपरोस् । छोराले उपचारका लागि यो परिवारले हालसम्म १५ लाख भन्दा बढि खर्च गरिसक्यो । अब आफुसंग पैसा छैन, अझै चरण चरणका अप्रेशन बांकी छन्, कस्ले सहयोग गर्छ ? श्रेयनको पिडा हेरेर सहयोगी मनहरुले मलाई ३० हजार रुपैंया श्रेयनको लागि पठाउनु भएको थियो, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट ५ हजार सहयोग रकम थपेर ३५ हजार सहयोग रकम श्रेयनको उपचारका लागि उनको परिवारलाई बुझायौं ।
दर्शकबृन्द, तपाई पनि श्रेयनलाई आफ्नै छोरा, नाति सम्झेर सहयोग गर्नुहोला । श्रेयनको केश जटिल छ । डाक्टरले तिघ्रा देखिनै श्रेयनको खुट्टा काट्नु पर्छ भनेका थिए तर श्रेयनको परिवारले पछि खुट्टा जोड्न मिल्छ कि भनेर घुंडा देखि उनको खुट्टा काट्न डाक्टरलाई अनुमति दिए । भित्रको घाउ निको भएको छैन । भगवानसंग म प्रार्थना गर्छु, श्रेयनको खुट्टामा इन्फेक्सन नहोस । अब यो भन्दा बढि पिडा श्रेयनलाई नदेऊ भगवान । यस्तो हुदा नि श्रेयनले हास्न भुलेका छैनन् । आमाको आंखाबाट आंशु ओभाएको छैन । श्रेयनको उपचारका क्रममा बिचमा एउटा ठुलो गल्ती भएकै हो । त्यसको लागि भिडियो पुरा हेर्नुस, श्रेयनलाई सहयोग गर्न उनको बुवाको नं र अकाउण्ट नं हामीले स्क्रिनमा राखेका छौं । युटुब मार्फत सहयोग गर्न म शिशिर भण्डारीलाई ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पोखरामा यौनकर्मीका लागि रेड लाईट एरिया